Adobe Creative Cloud Express: maodely tsara tarehy ho an'ny atiny amin'ny haino aman-jery sosialy, logos ary maro hafa | Martech Zone
Alatsinainy 21 Febroary 2022 Alatsinainy 21 Febroary 2022 Douglas Karr
Rehefa nilaza i Mari Smith fa tiany a fitaovana ho an'ny marketing amin'ny Facebook, midika izany fa mendrika dinihina. Ary izany no nataoko. Adobe Creative Cloud Express, fantatra taloha hoe Adobe Spark, dia vahaolana maimaim-poana amin'ny tranonkala sy finday ho an'ny famoronana sy fizarana tantara hita maso. Ny Creative Cloud Express dia manamora ny fanombohana amin'ny maodely sy fananana an-taonany maro ho an'ny atiny media sosialy, logos ary maro hafa.
Miaraka amin'ny Adobe Creative Cloud Express, afaka mamorona sary ara-tsosialy, logos, flyers, sora-baventy, Tantara Instagram, doka, Banner YouTube, afisy, karatra fandraharahana, Thumbnails YouTube, sy ny maro hafa ianao. Ny sehatra dia manana môdely an'arivony miaraka amin'ny sary tsy misy mpanjaka azonao ampiasaina.
Raha vao miditra amin'ny fampiasana ny ID Adobe na ny fidirana ara-tsosialy ianao dia afaka manomboka tetikasa vaovao na miditra amin'ny tetikasa teo aloha izay efa natombokao na vitanao. Ny sehatra dia naorina ho an'ny tsy mpamorona, ahafahanao manao izay rehetra ilainao, amin'ny toerana iray, miaraka amin'ny fitaovana intuitive mamela anao hanaisotra ny fiaviana, lahatsoratra mamelona, ​​manampy ny marikao, sy ny maro hafa. Amin'ny paompy vitsivitsy monja dia azonao atao ny manova ny haben'ny votoaty ho an'ny tranokalan'ny media sosialy rehetra ary manampy ny vokatra kalitao Adobe Photoshop amin'ny fotoana fohy.
Azonao atao ihany koa ny mizara logo, endritsoratra, ary singa marika hafa amin'ny ekipanao, ary manonta sy mizara antontan-taratasy PDF miaraka amin'ny endri-javatra ampiasain'ny Adobe Acrobat — mba hahafahanao mametraka ny asa tsara indrindra. Miasa amin'ny sehatra desktop na misintona ny iray amin'ireo fampiharana finday hanombohana!
Tags: adobe creative cloud expressAdobe kilalaon'afopejy fitsapana adobepaozy adobehoronan-tsary adobedokam-barotraanimé videosora-baventykaratra fandraharahanamamorona sarymamorona sary media sosialyamboary horonan-tsaryAfisy sy saryinstagram storiesLogosafisymizara tantarasary sosialyfitantaranafanovana horonan-tsarytantara an-tranonkalabaniera youtube